Mayelana NATHI | Izingxenye zeCangzhou Hengyue auto Co., Ltd.
Izingxenye ze-Cangzhou Hengyue auto Co., Ltd. itholakala eHejian, Hebei, eduze nenhlokodolobha yaseBeijing naseTianjin port, ezokuthutha zilula kakhulu.
Inkampani yethu iqoqo locwaningo oluzimele nentuthuko, ukukhiqizwa, ukuthengisa njengenye yenkampani yokukhiqiza yobuchwepheshe, ineminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho komhlangano wokubamba. Ukukhiqizwa kwaminyaka yonke kwe-clutch disc ngaphezu kwamaqoqo ayi-100,000. Le nkampani inezinhlobonhlobo ezinkulu zokumisa okwenziwe ngosayizi naphakathi nendawo, imishini yokucubungula ukushisa kokushisa, kanye nemishini ehlukahlukene yesikhunta nemishini yokuhlola. Ikhwalithi yomkhiqizo inokwethenjelwa, futhi inokumelana nokugqoka, ukumelana nokushisa okuphezulu nempilo ende, njll.
Sihlala sizama ngakho konke ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende. Kusukela ekuthuthukisweni okungenakulibaleka kokuhwebelana kwembulunga yonke kwezomnotho, inkampani yethu izimisele ngobuqotho ukubambisana namabhizinisi emhlabeni jikelele ukufeza isimo sokuwina.